Kana iwe uchida kuziva maitiro ekugadzirisa maAmerica nokuda kwemashoko ako akakodzera akakodzera - iwe watova munzvimbo yakarurama. Waiziva here kuti peji yekutanga yemigumisiro yekutsvaga kuAmerica inowana kudarika 60% yehuwandu hwekutsvaga motokari inobva kune vatengi vanogara vachitsvaka zvinhu zvakatengeswa pamusoro apo? Saka, zvinoreva kuti iwe unoswedera pedyo nepamusoro weAmerica tsvakurudzo yekutsvaga mazwi ako akakodzera uye mazwi ekutsvaga kwenguva yakareba - izvo zvingawedzerwa kutengesa iwe unogona kubatsirwa kubva. Asi maitiro api kuAmazon nokuda kwemashoko makuru akakodzera, kunyanya kana iwe uchiri mutengesi wevashandi vekutsvaga achangotora matanho ekutanga ari mumisika yepamusoro? Mhinduro shoma ndeye - kunzwisisa mazwi makuru uye zvinyorwa zvavo zvikuru zvakaratidzwa kubva mumaonero eA9 search ranking algorithm - mini bottom vertical coil. Saka, pasi apa ndichaenda kukuratidza kuti ungaratidza sei kuAmazon - nokupa mutsara mupfupi pamusoro pezvinonyanya kukosha mazwi uye nenzira yakarurama yekuvaziva pamusoro apo.
Jungle Scout - i-stop-shop-yega yega rese entrepreneur kutengesa kuAmazon. Kunze kwaro inonyanya kukosha mashoko ezvinyorwa zvese, Jungle Scout yakaratidza kuti inobatsira chaizvo kana ichiuya pakutsvaga mimwe michina mitsva yemitengo, kana kuti kudiwa kwekutora chikamu chekukwikwidza kwekukosha kwepamusoro - zvose pamusoro pemiti inobatsira inobatsira, uye iyo yakareba refu-muswe michina yakafanira kuenzanisa.